Arduino သုံးစွဲသူများအတွက်အသစ်စက်စက် IDE အတွက် Scratch အတွက် အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Free boards ၏ပရိုဂရမ်းမင်းသည်ဖက်ရှင်ကျလာပြီး Raspberry Pi သို့မဟုတ် Arduino ကဲ့သို့သောပျဉ်ပြားများပိုမိုတတ်နိုင်လာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သင်ခန်းစာများနှင့်ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာများသည် ပို၍ စျေးနှုန်းသက်သာပြီးအခြေခံပရိုဂရမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာရန်နာရီအနည်းငယ်သာကြာသည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ Arduino (သို့) Raspberry Pi အတွက်တိကျတဲ့ပရိုဂရမ်တွေဖန်တီးဖို့ကြိုးစားတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဤပရိုဂရမ်များ၌အခြားပရိုဂရမ်များပြုလုပ်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များပင် Raspberry Pi အတွက်ဥပမာများစွာရှိသည်။
Arduino နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျော်ကြားဆုံးပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ပရိုဂရမ်များဖန်တီးရာတွင်အထောက်အကူပြုမည့်အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် Arduino software ကို Scratch for ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arduino စီမံကိန်းများအတွက်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်။
1 Arduino အတွက်ခြစ်ရာကဘာလဲ?
2 Arduino အတွက် Scratch ကို Install လုပ်နည်း။
3 SfA နဲ့ဘယ်လိုသဟဇာတဖြစ်သလဲ။
4 Arduino သို့မဟုတ် Arduino IDE အတွက်ခြစ်ရာ?
ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Arduino အတွက် Scratch လို့ပြောရမှာပါ။ Scratch for Arduino သည်အသစ်သောသုံးစွဲသူများကိုရည်ရွယ်သည့် IDE အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်ရေးရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခု၊ ကုဒ်များ၊ ယင်း၏စုစည်းခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲသည် Scratch ဟုခေါ်သောကျော်ကြားသောကလေးများ၏ app ကိုအခြေခံသည်။ ဤလျှောက်လွှာသည်ရှာဖွေသည် ကလေးများအကြားပရိုဂရမ်းမင်းသင်ကြားခြင်းသည်လုပ်ကွက်များနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်သူတို့၏ယုတ္တိအရှိဆုံးစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ Scratch for Arduino ၏အကြံသည်အမြင်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်ခြင်းဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူတို့၏ပရိုဂရမ်းမင်းအဆင့်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ arduino အတွက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။
Scratch for Arduino သည် Scratch နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ Arduino စီမံကိန်းနှင့်သော်လည်းကောင်းဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အခမဲ့စီမံကိန်းများဖြစ်သောကြောင့်အဆုံးအသုံးပြုသူသည်သူတို့၏ Arduino ဘုတ်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုချင်းစီ၏အကောင်းဆုံးစီမံချက်ကိုယူထားသည်။ ဒီစီမံကိန်းသုံးခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆက်သွယ်ဘူးလို့ပြောရမယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ Scratch သည် Arduino အတွက် Scratch ဖြစ်လာနိုင်သည့် option မရှိသကဲ့သို့ Arduino IDE သည် Scratch for Arduino ဟုခေါ်သော plugin တစ်ခုဖြင့် visual programming ကိုခွင့်မပြုပါ။ ခြစ်ရာသည်သီးခြားဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည် Scratch for Arduino သည် Arduino IDE ကဲ့သို့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အချို့သော Arduino ပျဉ်ပြားများမောင်းသူများပါ ၀ င်သောသီးခြားဘက်စုံဖွဲ့စည်းမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ရပ်ရွာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Android အတွက် application တစ်ခုကစမတ်ဖုန်းကိုပရိုဂရမ်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရုံသာမက HTTP protocol ကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့ software ကိုလည်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်.
Arduino အတွက် Scratch ကို Install လုပ်နည်း။
Scratch for Arduino အစီအစဉ်သည်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည်၊ အနည်းဆုံးအသုံးပြုသူအများဆုံးရှိသည့်လူကြိုက်အများဆုံးပလက်ဖောင်းများ - ၎င်းကို Windows, macOS, Gnu / Linux နှင့် Raspberry Pi ဖြန့်ဝေမှုများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်ဒါကြောင့်ငါတို့သုံးတဲ့ဘယ်ကွန်ပျူတာမှာမဆိုဒီ program ကိုရနိုင်တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ program ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်ဖို့လိုတယ်။ On စီမံကိန်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ငါတို့ရှိသမျှသည် operating system များအတွက်အစီအစဉ်များကိုရနိုင်သည်။
Windows ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် downloaded package ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ ကျနော်တို့က "လာမည့်" သို့မဟုတ် "လာမည့်" ခလုတ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်နှိပ်ရပါလိမ့်မယ်ရသော installation wizard ကိုလိုက်နာပါ။
သင် macOS ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသော package ကို double click မလုပ်မီ macOS Configuration ကိုသွားပြီး operating system သည်ခွင့်ပြုချက်မရှိသော program များတပ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရမည်။ ငါတို့အဲဒါပြီးတာနဲ့ လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပြီးလျှောက်လွှာဖိုလ်ဒါသို့ဆွဲယူသွားသည်.
Gnu / Linux ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ငါတို့သုံးရမယ် ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှသက်ဆိုင်ရာအထုပ်ကို download လုပ်ပါဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် 64-bit သို့မဟုတ် 32-bit platform များအတွက်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဖြန့်ဖြူးမှုသည် debian packages များသို့မဟုတ် Fedora packages များဖြစ်သော deb သို့မဟုတ် rpm ကိုအသုံးပြုပါကမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော package ကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် folder အတွင်းရှိ terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ရမည်။ ၎င်းသည် folder space ပေါ်တွင် right-click နှိပ်၍ terminal ထဲတွင်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ပရိုဂရမ်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအနည်းငယ်အကြာတွင်ထည့်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ menu တွင် Scratch for Arduino ဟုခေါ်သော icon တစ်ခုရပါလိမ့်မည်။ သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း, ဒီ visual IDE တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းအားမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ပပရိုဂရမ်များမလိုအပ်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ Arduino Project Board အားလုံးသည် Scratch for Arduino နှင့်သဟဇာတမရှိကြပါ။ ယခုအချိန်တွင် သူတို့သာသဟဇာတဖြစ်ကြသည် Arduino UNO, Arduino Diecimila နှင့် Arduino Duemilanove။ ကျန်တဲ့ပျဉ်ပြားတွေဟာပရိုဂရမ်နဲ့သဟဇာတမဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ကုဒ်ကိုသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ဆိုလိုတာကငါတို့ဖန်တီးထားတဲ့ကုဒ်ကိုအခြား IDE ဆီကိုတင်ပို့နိုင်တယ်၊ ဒါမှအဲဒါကိုပြုစုပြီးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်။ ခြစ်ရာကဲ့သို့ SfA သည်ကုဒ်များကို Arduino IDE ကဲ့သို့သော IDE သို့ပို့နိူင်ပြီး Arduino IDE နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောစီမံကိန်း၏အခြားဘုတ်အဖွဲ့များသို့အစီအစဉ်ကိုပေးပို့နိူင်သည်။ သူတို့ကတင်ပို့မှုသည် Arduino အတွက် Scratch မှတဆင့်ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်စရာမလိုဘဲမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း။
ကုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လိုင်စင်ချခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်၊ ဖိုင်များသည်အားလုံးသောလမ်းညွှန်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Scratch ဖိုင်များကို Scratch for Arduino မှအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းဤပရိုဂရမ်များသည် Scratch နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ရင်တောင်မှ ပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံးမှထုတ်လုပ်သော code သည် Arduino IDE နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤပြproblemနာသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Arduino သို့မဟုတ် Arduino IDE အတွက်ခြစ်ရာ?
ဒီနေရာမှာ Arduino အတွက်ပရိုဂရမ်ပိုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတာသင်သေချာပေါက်တွေးမိမှာပါ Arduino သို့မဟုတ် Arduino IDE အတွက်ခြစ်ရာ? ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်းမင်းအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်သိပါကအနည်းငယ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဖြေဆိုနိုင်သည့်လေးနက်သောမေးခွန်းတစ်ခု။ Scratch for Arduino သည်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနည်းသောသုံးစွဲသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည် ၎င်းကို semi-programming ဟုခေါ်သော block block programs များအတွက် visual aspect ကကူညီပေးသည်။ Arduino IDE သည်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူများအတွက်အမြင်အာရုံရှုထောင့်မလိုအပ်ဘဲမှန်ကန်စွာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲရန်အတွက် IDE ဖြစ်သော်လည်း။ Y ပရိုဂရမ်သည်ကလေးသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အတွက်ဖြစ်ပါက Arduino အတွက် Scratch သည်သင့်လျော်သောအစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းနေပါသည်.
ငါတို့မှာအားကောင်းတဲ့အသင်းရှိရင် Desktop Computer တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလုံလောက်လိမ့်မည်။ ဖြေရှင်းနည်းနှစ်ခုလုံးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Arduino အတွက် Scratch သည်ကျွန်တော်တို့ကို block လုပ်ပြီးကူညီနိုင်သည်။ Arduino IDE သည် program ကို Arduino မှသို့မဟုတ် Arduino IDE နှင့်အလုပ်လုပ်သောအခြားစီမံကိန်းများဆီသို့ပို့ပေးသည်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုရွေးချယ်မှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည် ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Arduino အတွက် Scratch, အသစ်စက်စက် Arduino သုံးစွဲသူများအတွက် IDE တစ်ခု